Terms uye Conditions pamusoro Advent Calendar |
Deposit £ 10 kuwana 25 Tunoruka pamusoro Gonzo Kutsvaka Kwevanhu
Kukwidziridzwa Izvi zvichava vanoshingaira zuva 3rd December 2016 (GMT).
The Tunoruka achava ukoshi 20p uye kushanda musi Gonzo Kutsvaka Kwevanhu
Vatambi nomumwe uchagamuchira vaifanira kubva 25 vakasununguka Tunoruka pamusoro Gonzo Kutsvaka Kwevanhu chete
Kukwidziridzwa Izvi zvichaita chete kuva rinoshanda kwaunoita dhipozita iroro rokutanga kana ukashandisa bhonasi Code “GONZO25”
Chete wagering pamusoro mitambo iyi: Starburst, Gonzo Kutsvaka Kwevanhu, Twin vhiririka, Spinata Grande, piramidhi, Piggy Pfuma, South Park, Jack Hammer, zvokukochekera Heroes, Me Dazzle, Neon Stax, Dracula, Jack uye The
Beanstalk, vakakunda, Reel Rush, Lights, Disco Tunoruka, Koi Princess, Mythic Maiden, Sparks, Stickers, Magic Portals, Blackjack Classic, Fruit Shop, Flowers, Utsi hwemvura Tower, Fisticuffs, Lucky Angler, Dutu Farm Kutiza, Subtopia, Jack Hammer 2, Big Bang, Invisible Man, South Park 2 Reel Tobira, Mambo cheap car insurance, vatorwa, hwihwinyara, Pfuti nemaruva, Tenzi Mystery, fambisa, Aloha, Jimi Hendrix, Champions Cup, Nrvna, Apo PENGURUVE Fly, Motorhead, Zvakavanzika Atlantis, Secrets of Christmas will count towards the reduction of the wagering requirement
Deposit £ 10 kuwana 10 Tunoruka pamusoro Gonzo Kutsvaka Kwevanhu
Kukwidziridzwa Izvi zvichava vanoshingaira zuva 2nd, 10fung uye rechi17 December 2016 (GMT).
A bhonasi pamusoro 10 Tunoruka zvichawedzerwa kuchikwama chenyu.
Tunoruka izvi zvichava ukoshi 20p uye kushanda musi Gonzo Kutsvaka Kwevanhu chete
Vatambi nomumwe uchagamuchira vaifanira kubva 10 vakasununguka Tunoruka pamusoro Gonzo Kutsvaka Kwevanhu
Kukwidziridzwa Izvi zvichaita chete kuva rinoshanda kwaunoita dhipozita iroro rokutanga kana ukashandisa bhonasi Code “GONZO10”
Chete wagering pamusoro mitambo iyi: Starburst, Gonzo Kutsvaka Kwevanhu, Twin vhiririka, Spinata Grande, piramidhi, Piggy Pfuma, South Park, Jack Hammer, zvokukochekera Heroes, Me Dazzle, Neon Stax, Dracula, Jack uye The Beanstalk, vakakunda, Reel Rush, Lights, Disco Tunoruka, Koi Princess, Mythic Maiden, Sparks, Stickers, Magic Portals, Blackjack Classic, Fruit Shop, Flowers, Utsi hwemvura Tower, Fisticuffs, Lucky Angler, Dutu Farm Kutiza, Subtopia, Jack Hammer 2, Big Bang, Invisible Man, South Park 2 Reel Tobira, Mambo cheap car insurance, vatorwa, hwihwinyara, Pfuti nemaruva, Tenzi Mystery, fambisa, Aloha, Jimi Hendrix, Champions Cup, Nrvna, Apo PENGURUVE Fly, Motorhead, Zvakavanzika Atlantis, Secrets of Christmas will count towards the reduction of the wagering requirement
50% Nanganisa kusvika £ 100
Kukwidziridzwa Izvi zvichava tichishingaira pamusoro 7th December (GMT).
Kuti ave kukwikwidza pamitambo bhonasi, vatambi vanofanira kuisapo kushoma pakati £ 10 pazuva kukurudzira.
A bhonasi pamusoro 50% kwako okubhengi kusvikira vaifanira pamusoro £ 100 zvichawedzerwa kuchikwama chenyu.
bhonasi Izvi zvichava tichishingaira kwaunoita dhipozita wokutanga promotional nguva apo iwe kushandisa bhonasi remitemo “MAKUMI MASHANU”
Kukwidziridzwa Izvi zvinogona chete kusashanda kamwe muna promotional munguva.
Deposit £ 10 kuwana 50 Gonzo Tunoruka
Kukwidziridzwa Izvi zvichava vanoshingaira pamusoro yechi23 December 2016 (GMT).
Vatambi nomumwe uchagamuchira vaifanira kubva 50 vakasununguka Tunoruka pamusoro Gonzo Kutsvaka Kwevanhu.
Kukwidziridzwa Izvi zvichaita chete kuva rinoshanda kwaunoita dhipozita iroro rokutanga kana ukashandisa bhonasi Code “GONZO50”
200% Nanganisa kusvika £ 40
Kukwidziridzwa Izvi zvichava tichishingaira pamusoro 4th, 13fung, 16fung uye rechi21 December (GMT).
A bhonasi pamusoro 200% kwako okubhengi kusvikira vaifanira pamusoro £ 40 zvichawedzerwa kuchikwama chenyu.
bhonasi Izvi zvichava tichishingaira kwaunoita dhipozita wokutanga promotional nguva apo iwe kushandisa bhonasi remitemo “200”
100% Nanganisa kusvika £ 100
Kukwidziridzwa Izvi zvichava tichishingaira pamusoro 1st, 5fung, 8fung, 15fung uye 22nd December (GMT).
A bhonasi pamusoro 100% kwako okubhengi kusvikira vaifanira pamusoro £ 100 zvichawedzerwa kuchikwama chenyu.
bhonasi Izvi zvichava tichishingaira kwaunoita dhipozita wokutanga promotional nguva apo iwe kushandisa bhonasi remitemo “100”
Deposit £ 10 kuwana 25 Starburst Tunoruka
Kukwidziridzwa Izvi zvichava vanoshingaira zuva 6th uye rechi12 December 2016 (GMT).
A bhonasi pamusoro 25 Tunoruka zvichawedzerwa kuchikwama chenyu.
Tunoruka izvi zvichava ukoshi 10p uye kushanda musi Starburst chete
Vatambi nomumwe uchagamuchira vaifanira kubva 25 vakasununguka Tunoruka musi Starburst
Kukwidziridzwa Izvi zvichaita chete kuva rinoshanda kwaunoita dhipozita iroro rokutanga kana ukashandisa bhonasi Code “STAR25”
Kuti Activate ari Tunoruka vatambi vanofanira vomurova Starburst
300% Nanganisa kusvika £ 30
Kukwidziridzwa Izvi zvichava tichishingaira pamusoro 9th uye rechi19 December (GMT).
A bhonasi pamusoro 300% kwako okubhengi kusvikira vaifanira pamusoro £ 30 zvichawedzerwa kuchikwama chenyu.
bhonasi Izvi zvichava tichishingaira kwaunoita dhipozita wokutanga promotional nguva apo iwe kushandisa bhonasi remitemo “300”
10 Free Starburst Tunoruka
Kukwidziridzwa Izvi zvichava vanoshingaira zuva rechi18 December 2016 (GMT).
The Tunoruka achava ukoshi 10p uye kushanda musi Starburst chete
Vatambi nomumwe uchagamuchira vaifanira kubva 10 vakasununguka Tunoruka musi Starburst
Deposit £ 10 kuwana 100 Starburst Tunoruka
Kukwidziridzwa Izvi zvichava vanoshingaira zuva rechi14, 20fung uye rechi24 December 2016 (GMT).
A bhonasi pamusoro 100 Tunoruka zvichawedzerwa kuchikwama chenyu.
Kukwidziridzwa Izvi zvichaita chete kuva rinoshanda kwaunoita dhipozita iroro rokutanga kana ukashandisa bhonasi Code “STAR100”
Terms uye Conditions Free Tunoruka neChishanu